Suxufiyad iswiidhish ah oo khasab lagaga saaray Suuriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cecilia Uddén, suxufiyadda idaacadda Sweden uga soo warranta Bariga Dhexe. sawir: Sveriges Radio.
Suxufiyad iswiidhish ah oo khasab lagaga saaray Suuriya
In saxaafadda xorta ahi ka soo warranto goobaha dagaallada waa waajib
La cusbooneeyay fredag 16 december 2016 kl 12.48
La daabacay torsdag 15 december 2016 kl 19.33
Cecilia Uddén, oo uga soo warrameeysay idaacadda Sweden (SR) dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suuriya ayaa khasab lagaga saaray dalkaasi, kadib kolkii viisadii lagala noqday.
Cecilia Uddén, ayuu maamulka dalkaasi ka jiraa ku eedeeyay inay warar aan dhab ahayn dalkaasi ka baahisay, isla-markaana loo sheegay inay dalka isaga baxdo kolkii dib loogala noqday viisadii ay dalkaasi ku gashay. Suxufiyadda ayaa dhowaantan ka gudubtay xadka u dhexeeya waddammada suuriya iyo Lubnaan iminkana ku sii jeedda magaalada Bayruud ee caasimadda dalka Lubnaan.
– Waxaannu ka dhiidhinay go’aanka laga gaaray suxufiyadda idaacadda iyo sida loola dhaqmay, sida ay sheegtay agaasimaha guud ee Idaacadda Sweden (Sveriges Radio) Cilla Benkö oo ka faalootay falkaasi.
Agaasimaha guud ayaa hoosta ka xarriiqday in Sweden halkeeda ka sii wadi doonto inay ka soo warranto xaaladda dalka Suuriya, isla-markaana ay idaacadda ay agaasimaha guud ka tahay SR dalban doonto viiso hor leh oo ey carrigaa ugu dirto suxufiyiin hor leh ee uga soo warrama.
– Xorriyadda saxaafaddu waa muhiim si loo helo nidaam dimoqoraadiyadeed ee ka shaqeenaya caalamka. Waxaa loo baahan yahay suxufiyiin goob-joog ku ah oo ka soo war-bixiya goobaha ay ka jiraan khilaafyada waaweyn.
– Waxay tallaabadani muujinaysaa baahida loo qabo howlaha saxaafad madax-bannaan. Waxay sidoo kale muujinaysaa sida ay saxaafadda noocaasi ah ay halista ugu tahay maamullada qaarkood, sida uu sheegtay Cilla Benkö.
Cecilia Uddén ayaa iminka ku sugan dalka lubnaan. Shalayto ayay ahayd kolkii Cecilia Uddén lagu war-geliyey in lagala laabtay viisadii saxaafi-nimo oo ay kaga howl-galeeysay dalka Suuriya, isla-markaana ay dalka isaga baxda.
Wixii intaa ka dambeeyay ayaa lagu khasbay in aanay ka bixin huteelkii ay ka deggenayd magaalada Aleppo, dabadeedna ay dalka isaga baxdo.
Beryihii ugu dambeeyay ayay Cecilia Uddén ka soo war-bixinaysay magaalooyinka dimishaq iyo Aleppo. Sida ay sheegeen hayadaha dalka Suuriya inay suxufiyaddu dalkaasi ka baahisay warar aan dhab ahayn.
– Eedeeymahaasi waa kuwo aanay waxba ka jirin oo aan xaqiiq loo hayn, sida ay sheegtay Cella Benkö, agaasimaha guud ee idaacaddu.
Idaacadda Sweden ayaanay iminka uga howl-gelin dalka Suuriya howl-wadeenno idaacadda ka howl-gala wixii ka dambeeyay kolkii ay Cecilia Uddén ka baxday dalka Suuriya si ay ugaga soo warranto xaaladda dagaalka sokeeye ee ka aloosan.
– Waxaan rajeeyn in sida ugu dhakhsiyaha badan ay idaacaddu u dirsato howl-wadeenno carrigaa uga soo warrama si aannu uga soo warranno waxa aannu indhahayaga ku aragno. Aad ayay muhiim u tahay in dalka Suuriya ay ku sugnaadaan si ay uga soo war-bixiyaan saxaafad madax-bannaan ee ka soo warrami kara dhibaatooyinka halkaasi ka aloosan, sida uu sheegay Anders Pontara, ku simaha laanta wararka dibadda ee Ekot.
Löfven: Waxay muujinaysaa inaan la doonayan xaqiiqda